Kmetija Na Čendavš - iApartment Arnika
Ifama yaseNa Čendavš - ifama enombono
Indlu ebizwa ngokuba yiArnika ayivakali kwaye ikhangeleka ngathi yi rustic. Yakhiwe kwaye inikwe izinto zendalo. Ukufudumala kweenkuni, ukuqwalaselwa kunye nokunyamekelwa kwemikhosi yakho kunye nendalo engqongileyo ejikelezayo iya kwenza iiholide ezingenakulibaleka kwifama.
Iifestile ezikwiflethi zinezixhobo zokuvala iifestile kunye nescreen ngokuchasene nezinambuzane.
• igumbi lokuhlambela (ishawa, esomisi enwele)
• Ikhitshi langoku kunye negumbi lokutyela (ioveni eneglasi yeceramic hotplate, ifriji enesikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, indawo yokuvula ikhitshi, iinkomo zamanzi, umenzi wekofu, izixhobo zasekhitshini kunye nezinto zokuthambisa, iiglasi, iipleyiti)
• umatrasi owandisiweyo (ibhedi yesofa)
• I-TV, i-intanethi yamacingo YAMAHHALA
• igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye neyodwa
Ubungakanani: 49 m2
Sikubonelela ngelinen yokulala, iitawuli, amalaphu ekhitshi.
Sinikezela ngegumbi eliqhelekileyo lokutshintsha, i-pantry ye-skis kunye nezixhobo, indawo yokungena eyahlukileyo, i-balcony eqhelekileyo kunye nendawo yokupaka.
I-apartmen ikumgangatho wesibini, asinayo i-elevator.
Indawo yethu yokuhlala sisiqalo esihle kakhulu kwimisebenzi yangaphandle, umzekelo ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokutyibilika; I-Ski resort Cerkno ikumgama oziikhilomitha ezi-2,5 kuphela.
Idolophu yaseCerkno ikumgama oziikhilomitha ezisi-7, apho unokufumana iivenkile, ibhanki, impompo yepetroli, iindawo zokutyela kunye neTerme Cerkno (i-Thermal Spa ye-Hotel Cerkno).
IFama yaseNa Čendavš ilele kwilali esasazekileyo yaseNovaki kwiNgingqi yaseSeverna Primorska kumphakamo weemitha ezingama-600. Umzila ophambili uhamba ngefama ekhokelela phambili kwiNgingqi yeGorenjska (Bohinj, Bled, Triglav National Park). Idolophu ekufutshane nenkulu iCerkno ikumgama oziikhilomitha ezisi-7 kuphela.
Xa ujonga ngeenxa zonke kwifama kwaye woyiswe bubuhle beenduli ezijikelezileyo, uya kulibala malunga namaxhala emihla ngemihla. Ukuhamba kumadlelo atyatyambayo nokuntyiloza kweentaka kuya kukuzisela uxolo noxolo. Ifilosofi yethu yobomi kukuhlala kunye nendalo kwaye kwangaxeshanye siyihloniphe. Siyakuvuyela ukwabelana nawe ngoku kwiFama yaseNa Čendavš.
Sisoloko sifumaneka kwimibuzo yakho.